2021 Corrugated Plastic Board Musika Gadziriso Mushumo muna 2026 Coroplast Primex Plastics, SIMONA
Chirevo chitsva chekutsvagisa pamusika wemabhodhi epurasitiki, unofukidza kuongororwa kwemusika, ramangwana rehupfumi, kukwikwidza kwevagadziri, kupa (kugadzirwa) uye kuongorora mashandisirwo Wongorora mamiriro epasirese kuburikidza nevaongorori vedu kuti vanzwisise kukanganisa kweCOVID-19 pane yakagadziriswa bhodhi marke .. .
Inguva yakareba zvakadii iyo hombe bhodhi bhodhi turnover bhokisi ingashandiswa?
ne admin pane 20-11-08
Hollow Board Vagadziri Hupenyu hweiyo anti-static hollow board turnover bhokisi harina kungoenderana nehunhu hwechigadzirwa, asiwo zvine chekuita nenzira yekushandisa. Kuti uwedzere hupenyu hwebasa uye udzikise mutengo wekushandisa, chii chinofanira kuitwa? Kudzivirira kunofambira mberi magetsi, iyo mhango jira manu ...